IQueenax, ukuqeqeshwa okuphelele kakhulu futhi kumnandi | Bezzia
Queenax, ukuqeqeshwa okuphelele kakhulu futhi kumnandi
UToñy Torres | 03/07/2021 18:00 | Ukuzivocavoca
Uma ufuna ukujima okuphelele, okusebenzayo nokujabulisayo, iQueenax ingeyakho. Uhlobo lokuqeqeshwa lokho Kwenziwa ngohlobo lwezinyoni oluthola igama elifanayo, ongasebenza ngawo umzimba wonke ngesikhathi esifushane futhi lapho uzokwazi ukukhombisa ngaso isibalo esimangazayo.
IQueenax ingukuqeqeshwa kwemvelaphi yase-Italy futhi ihlanganisa izinzuzo zokuqeqeshwa okusebenzayo nokumiswa. Lolu hlobo lokuqeqeshwa lunamandla amakhulu futhi luyajabulisa, ngoba kwenziwa ngohlobo lwebhokisi lapho ungenza khona izivivinyo ezihlukile. Futhi, ungaba nesikhathi sakho sokuzivocavoca nabanye abantu, njengoba kungukuzivocavoca kweqembu.
Ngabe ufuna ukuthola ukuthi iQueenax iqukethe ini? Lapha sikutshela konke odinga ukukwazi ngalolu hlobo lokuqeqeshwa, ongakuhlanganisa nezinye izinhlobo zokuzivocavoca.
1 Lunjani iseshini yeQueenax
2 Lolu hlobo lokuqeqeshwa lulungele ini?
3 Izinzuzo zeQueenax
Lunjani iseshini yeQueenax
Iseshini yeQueenax kufanele iholwe njalo nguchwepheshe, odizayina iseshini ngendlela yokuthi ekugcineni, kusetshenziswe ingxenye enkulu yemisipha yomzimba. Kwenziwa eqenjini, yize kungafanele kweqe abantu abayisishiyagalombili. Ukuzivocavoca kweQueenax kuvame ukuhlala cishe isigamu sehora futhi ukuzivocavoca ngamandla aphezulu noma aphakeme kakhulu kuyenziwa, yize kungokwesikhashana.
Ukuzivocavoca okwenziwayo kubizwa ngokuthi yi-super functional nazo zonke izinhlobo ze- izivivinyo zokumiswa. Endaweni noma ekhejini lapho kwenziwa khona iQueenax, ungathola amathuluzi afana nemigoqo, amasongo, othayi nazo zonke izinhlobo zezinsiza. Okuhloswe ngalolu hlobo lokuziphatha ukuthi abantu abenza isekethe bayakwazi ukusebenza ngokuzivocavoca okunhlobonhlobo.
Lolu hlobo lokuqeqeshwa lulungele ini?
Enye yezinzuzo eziphambili zeQueenax ukuthi ilungele zonke izinhlobo zabantu. Yize kubaluleke kakhulu lokho iseshini yakhelwe ngokuya ngamakhono abantu ababamba iqhaza ekuqeqesheni. Ukungaguquguquki kubalulekile kunoma yimuphi umdlalo, ngoba akunakubakhona ngcono ngaphandle kokuzijwayeza. Ngalokhu, lolu hlobo lwesimo luphelele ngoba lunikeza imiphumela emihle ngesikhathi esincane kakhulu sokuzivocavoca.
Okuthile ngokungangabazeki okubalulekile uma kuziwa ekutholeni ugqozi lokuzivocavoca umzimba njalo. Noma kunjalo, uma unezinkinga emuva noma ujwayele ukulimala edolweni, Kufanele uthintane nochwepheshe ngaphambi kokwenza lo msebenzi ngoba ungasibucayi isimo sakho. Kodwa-ke, ukuhlala uphethwe nguchwepheshe kuyindlela yokugwema ukulimala.
I-Queenax ingukuqina okuphezulu nokusebenza oku-ultra esebenzayo, okungukuthi, ngumdlalo ovuthayo onamafutha. Uma ufuna ukunciphisa umzimba, ithoni futhi uthuthukise ngokuphelele umzimba wakho, lolu ukuqeqeshwa obukade ukufuna. Inamandla amakhulu ngenxa yezinhlobonhlobo zokuzivocavoca kanye nejubane ezenziwa ngalo, okwenza ukuthi kujabulise ngokwengeziwe. Uma ungaguquguquki, uzobona imiphumela ngesikhathi esifushane kakhulu futhi uzozizwa unogqozi olukhulu lokuqhubeka.
Vele, kufanele uhlale uhambisana nokuvivinya umzimba ngokudla okuhle. Akukho kudla okusebenzayo uma kungahambisani nokusebenza komzimba, futhi akukho ukuzivocavoca okuyisimangaliso okuzokwenza wehlise isisindo uma ungaqedi amafutha nezinye izinto eziyingozi ekudleni kwakho. Nge ukudla okunomsoco, ukubekezela nokuzinikela ukuthi lo neminye imidlalo idinga, ungathuthukisa impilo yakho kuwo wonke amazinga.
Ukungakhohlwa ingxenye ebalulekile yezempilo evame ukunganakwa, okuyimpilo yengqondo. Ukuzivocavoca umzimba kusiza ukunciphisa amazinga okuxineka, ama-endorphin akhishwa futhi ekugcineni kokuzivocavoca, uzizwa waneliseka okukhulu. Ukukhuphuka okukhulu kokuzethemba okuzoholela ekutheni uthuthukise ukuzethemba kwakho. Ngalokho, iQueenax ingenye yokusebenza okuhle kakhulu njengoba imnandi, iyashesha, uhlangana nabantu futhi bazokusiza uzizwe kahle ngaphandle nangaphakathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Ukuzivocavoca » Queenax, ukuqeqeshwa okuphelele kakhulu futhi kumnandi
IMacaroni ene-broccoli ne-shrimp pesto
Amathiphu wokuhlanza indlu ngaphambi kwamaholide